Nolol Faqri ah ayuu ku soo koray, Aabihii wuxuu ahaa Timo-Jare….(Ka bogo Qisada Geesigii Tottenham u soo saaray Champions League markii ugu horreysay Taariikhda)+SAWIRRO – Gool FM
Nolol Faqri ah ayuu ku soo koray, Aabihii wuxuu ahaa Timo-Jare….(Ka bogo Qisada Geesigii Tottenham u soo saaray Champions League markii ugu horreysay Taariikhda)+SAWIRRO
(London) 10 Maajo 2019. Tottenham ayaa habeen hore u soo gudubtay Final ka Champions League markii ugu horreysay taariikhdeeda kaddib kulan waali ah ay 3-2 uga adkaatay Ajax.
Kooxda reer Holland ayaa 1-0 uga soo adkaatay Spurs lugtii hore ee lagu soo ciyaaray London dabadeedna 2-0 ku marsiisay qeybta hore ee ciyaartii ka dhacday Johan Cruijff ArenA iyadoo ay wax kasta u muuqdeen inay soo afjarmeen.
Yeelkeede, laacibka reer Brazil Lucas Moura ayaa meel aan la fileyn uga soo baxay Tottenham oo Saddexleey u dhaliyay sidaana ugu soo saaray Finalka koobka dhaga waynaha.
Haddaba waxaad ogaataa in Moura uu dhib badan u soo maray si uu u soo gaaro heerka uu maanta joogo.
Wuxuu dhashay 3-da bishii Agoosto 1992, waxaa iska dhalay hooyo lagu magacaabo Maria iyo aabe lagu magacabo Jorge.
Moura aabihii wuxuu ahaa laacib hore oo kubbada cagta oo markii dambe noqday Timo-Jare iyo mar uu ka shaqeeyo dowladda.
Wuxuu ku soo koray nolol faqri ah wadooyinka halista badan ee dalka Brazil.
Hooyadii Maria waxay had iyo jeer dhihi jirtay in wiilkeedu uu noqon doono laacib ciyaara kubbada cagta waayo wuxuu ka laadi jiray caloosha markuu ku jiray UURKA.
26-jirka ayaa ka soo tagay gurigiisa isagoo 13-jir ah ay si uu u rumeeyo riyadiisa inuu noqdo xirfadle kubbada cagta ah.
Halka uu tababarka ku sameyn jiray oo uu ka helay farsamadiisa kubbada cagta waxaa ku hareersanaan jiray, burcad, dil, daroogo iyo qas intaba ku kacda.
Yeelkeede, laacibka ayaan ku safaadin inuu ka mid noqdo burcada ‘Gangs’ maadaama uu ku soo koray cid aad u aaminsan diintooda Catholic isla markaana had iyo jeer loo wadi jiray Kaniisadii ay isku guursadeen hooyadii iyo aabihii.
Farsamada Moura ayaa durba soo ifbaxday markii uu 5-jir ahaa oo wuxuuba ka ciyaarayay Akaadamiyada lagu magacaabo Marcelinho Carioca.
Wacdaraha uu laacibka ka dhigay Akaadamiyadaas ayaa keentay in lagu naaneyso Marcelinho oo ahaa laacibka ugu guulaha badan naadiga Corinthians oo wuxuu dhaliyay 206-gool 402 kulan uu u saftay kooxda sanadihii u dhexeeyay 1994 to 2001.
10-jirkiisii wuxuu soo qabtay indhaha kooxda Corinthians, balse daal badan iyo rafaad ayuu maray maadaama uu subixiina Waxbarasho (School) aadayay galabkiina tababar adag.
Waxaaba intaa ugu sii darnaa in halka uu tababarka u soo aadayo ay reerkiisa u jirtay inuu labo Bas iyo Tareen soo raaco taa oo dhibaato ku keentay caafimaadka wiilka yar.
Wuxuu durba noqday mid Daciif ah oo aan tabar lahayn, waalidkiisa ayaana naadiga Corinthians ka codsaday in wiilkooda loo sameeyo qabiir cunnooyinka nafaqada ah si ay murqihiisa u koraan.
Waalidka Moura ayaa sidoo kale Corinthians ka codsaday in ay goob kale u sameeyaan wiilkooda maadaama safar dheer loo galayo meesha uu tababarka ku sameynayo taa oo ay kooxdu ka biyo diiday, dagaal kaddibna kooxda ayaa laga soo ceyriyay.
Aabihii Jorge ayaa mar dambe codsi u gudbiyay naadig wayn ee Sao Paulo.
Inkastoo la aqbalay misne rafaad badan ayuu u mari jiray tababarka maadaama ay iyana ka fogeyd xaafadiisa isla markaana ay goobta ka buuxi jireen burcad, daroogada iyo dilka ka ganacsata.
Ugu dambeyn Lucas Moura ayaa nasiib u yeeshay inuu kulankiisii ugu horreeyay u safto Sao Paulo isagoo 18-jir ah, wuxuuna intaa kaddib wacdaro muuqata ka dhigayay horyaalka Brazil, wuxuuna soo jiitay indhaha kooxo waa wayn sida Manchester United iyo Inter Milan.
Hayeeshee, PSG ayaa ku guuleysatay tartanka loogu jiray laacibka reer Brazil oo markaa 20-jir ahaa sanadii 2012 waxayna kula soo saxiixdeen adduun dhan 38-milyan oo bound.
Waqti aad u fiican kuma soo qaadan kooxda reer France oo marna keyd buu ahaa marna wuu ciyaarayay, hayeeshee noloshiisa dhanka kale ayay hor mar ka sameysay oo wuxuu 2016-dii guursaday gabadha ay waqtiga dheer is jeclaayeen ee Larissa Saad.
Lamaanaha ayaa helay canugoodii ugu horreeyay 2017-dii iyagoona ugu magac daray Miguel.
Sanad kaddib markii loo dhalay canugiisii ugu horreeyay, Moura ayaa u soo dhaqaaqay kooxda Tottenham oo ka saxiixatay heshiis Shan sano iyo bar.
Waxaa jiray hadalo uu yiri Moura markii ay soo bandhigeysay kooxdiisa Cusub ee Spurs oo aysan dad badan markaa aaminsaney oo wuxuu sheegay in Tottenham ay leedahay tayada ay ugu guuleysan karto koobab waa wayn.
Moura ayaana ka dhabeeyay hadalkaa oo habeen hore ayuu saddexleey uga shubay Ajax si uu kooxda reer London ugu soo saaro Final ka Champions League markii ugu horreysay taariikhda.